Budata fireworks castle APK maka Android
Budata fireworks castle
Free Budata maka Android (84.00 MB)
Budata fireworks castle,
Fireworks nnukwu ụlọ egwuregwu bụ ịme anwansị egwuregwu na ị nwere ike igwu na ngwaọrụ gị na sistemụ arụmọrụ gam akporo.
Anyị na-eji oke mmasị na-ele ihe ngosi ọkụ ọkụ mgbe niile. Ọmarịcha oriri a na-ahụ anya nke ijikọ ọtụtụ cartridges nwere agba kwesịrị ile anya. Ọ bụrụ na ịnwalebeghị ịtụfu onwe gị nihu ma ọ bụ ọ bụrụ na ọ dị gị ntakịrị egwu, enwere m ndụmọdụ maka gị.
Ọ bụ egwuregwu dị egwu ebe a gaghị emerụ gị ahụ nụzọ ọ bụla ma ị nwere ike ịmepụta ọdịdị nke gị na agba ọkụ ọkụ. Nwere ike igwu ụdị egwuregwu ahụ na-atọ ụtọ ebe ọ bụla na mgbe ọ bụla ịchọrọ. Nwere ike nweta nelu a nnukwu ụlọ na gbaa gị gbaa si ebe a. Were obere gbaa iji kpughee foto ndị a mara mma wee chịkọta kpakpando. Nụzọ dị otú a, bụrụ onye na-ejedebe ọla edo kachasị elu.
The ga-enwe mmasị na ikuku nke egwuregwu a, nke nwere ọtụtụ narị foto mara mma. Ọ ga-eme ka ị nwee obi ụtọ na egwuregwu egwuregwu bara uru yana oge na-atọ ụtọ. Ọzọkwa, ọ dịghị ihe ọ bụla na egwuregwu ahụ ga-amanye gị. Hụtụbeghị egwuregwu ka mma ebe ị nwere ike iji oge ezumike gị. Na nke a, ọ dị iche na egwuregwu ndị ọzọ ma na-enye gị ahụmịhe dị iche iche. Ọ bụrụ nịchọrọ ịbụ onye mmekọ na egwuregwu a dị egwu, ịnwere ike ibudata egwuregwu ahụ nefu na ekwentị mkpanaaka gị.
fireworks castle Ụdịdị
Nha faịlụ: 84.00 MB
Kacha ọhụrụ na: 21-07-2021